कोटीहरूमा द्रुत लिंकहरू
पनि हेर्नुहोस् क्याप्सन भिडियोफोन FAQ
आवश्यकताहरू / लाभहरू
सेटअप र सुविधाहरू
सेवा / समर्थन
हामीलाई FACE-TO-FACE सम्पर्क किन चाहिन्छ?
श्रवण-क्षीण: म कसरी भिडियोफोनमा पाठ साझा गर्ने?
श्रवण-क्षीण: म कसरी भ्वाईड-टु-टेक्स्ट भ्डियोडियोबाट?
श्रवण-क्षतिग्रस्त: कसरी सा sign्केतिक भाषाको अनुवाद?
शारीरिक अशक्तता: सुविधाहरू?
शारीरिक अशक्तता: सहायक उपकरण?
तिनीहरू ठीकै छन् जाँच गर्नुहोस्, दृश्य संकेतहरूले
कपाल ब्रश? राम्रो बानी राख्दै
कपाल उछाल, तेल छैन? नियमित रूपमा स्नान गर्दै
कपाल गडबडी? भर्खर उठेका हुन सक्छ
आँखा चौडा खुला? पर्याप्त निन्द्रा प्राप्त गर्दै
चश्मा खुला छ? गलत ठाउँमा राखिएको वा बिर्सिएको छैन
सफा अनुहार? स्वस्थ धुने स्वच्छता
श्रृंगार / तैयार? आत्मसम्मान मानसिक स्वास्थ्यमा सम्बन्धित छ
एनिमेटेड अभिव्यक्ति, होडी? मस्तिष्क स्वास्थ्य
फ्लश गरिएको रातो गालहरू? अत्यधिक तातो खतरनाक छ
अनुहारको हाइड्रेसन? डिहाइड्रेशन छिटो समस्या पैदा गर्दछ
ताजा लुगाहरू? राम्रो स्वच्छता, स्वस्थ तापमान
औंलाहरु काटी काट्ने र सफा गर्ने? स्वस्थ बानी
हल्का हातहरू? पार्किंसनको चेक-अप
काँपिरहेका ओठहरू? Paranoia, चिन्ता
मुस्कुराउँदै मुख? खुशी देखिन्छ
हँसिलो आँखा? वास्तवमै खुशी छ! - हेरचाहकर्ताहरूका लागि थप जानकारी यहाँ
सामाजिक अलगाव र एकाकीपन
आमने सामने सम्पर्क, प्रति हप्ता3पटक, कम गर्दछ निराशा जोखिम - अधिक जान्नुहोस् यहाँ
सम्पर्क हुनु पर्दछ अनुहार-देखि-हुनु, प्रभाव गर्न
सामाजिक सम्पर्क एक भिन्नता को लागी, परिवार र साथीहरु संग हुनु पर्छ
स्वास्थ्य: सामाजिक एकलता संग जोडिएको छ
डिमेन्शिया / अल्जाइमर - कसरी गर्ने सिक्नुहोस् डिमेंशिया रोकथाम
संकेत र सुझावहरू यहाँ
भिडियोफोन स्वास्थ्य लाभहरू
कुनै पनि कम्प्युटर, आईप्याड / ट्याब्लेट वा मोबाइल फोनमा:
Skype चलाउनुहोस्। तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ www.skype.com.
स्काईपबाट भिडियो कल गर्नुहोस्, वा तिनीहरूले तपाईंलाई कल गर्न सक्दछन्।
कलको बखत, स्क्रीनमा ट्याप / क्लिक गर्नुहोस्। धेरै आईकनहरू देखा पर्नेछन्।
हिट साझेदारी स्क्रिन आइकन यदि देखाइएको छ; अन्यथा, हिट + आइकन पहिले।
यदि तपाईंसँग बहु स्क्रीनहरू छन् भने तपाईंले साझेदारी गर्न चाहानु भएको स्क्रीन चयन गर्नुहोस्।
विन्डोज नोटप्याड, म्याक टेक्स्टएडिट, वा कुनै पनि प्रोग्राम खोल्नुहोस् जसले तपाईंलाई पाठ प्रविष्ट गर्न दिन्छ।
कम्प्युटरमा: सम्पूर्ण स्क्रिन लिन विन्डो अधिकतम गर्नुहोस्।
ठूलो फन्ट प्रयोग गर्नुहोस् ताकि यसलाई पढ्न सजिलो छ।
तपाईंले टाइप गर्दा, तपाईंको पाठ तुरून्त तपाईंको साथीको भिडियोफोनमा देखा पर्नेछ।
भिडिओफोन प्रयोगकर्ताले केहि गर्दैन। केवल हाँस्नुहोस्, पाठ पढ्नुहोस् र कुरा गर्नुहोस्!
सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको एक हो Konnekt क्याप्सन भिडियोफोन वा सोध्नुहोस् Konnekt तपाइँको नियमित भिडियोफोन अपग्रेड गर्न। क्याप्शनिंग भिडियोफोनले आगमन आगमनलाई स्वचालित रूपमा पाठमा रूपान्तरण गर्दछ र स्क्रिनमा प्रदर्शन गर्दछ, दुबै भिडियो कलहरू र नियमित कलहरूका लागि।
वैकल्पिक रूपमा: कुनै पनि कम्प्युटर वा आईप्याड / ट्याब्लेटमा:
कुनै पनि आवाज मान्यता सफ्टवेयर खोल्नुहोस्, जस्तै विन्डोज स्पीच रिकग्निशन, म्याक डिक्टेसन, वा ड्र्यागन।
उत्तम परिणामहरूका लागि तपाईले यसलाई आफ्नो भ्वाइसमा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक पर्दछ।
हामी दृढ सुझाव दिन्छौं कि तपाई हेडसेट वा डेस्कटप माइक्रोफोन प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रोग्राम खोल्नुहोस् जस्तै विन्डोज नोटपैड वा म्याक टेक्स्टएडिट।
विन्डो आकार अधिकतम पार्नुहोस् र फन्टलाई एरियल or 36 वा ठूलोमा सेट गर्नुहोस्।
जब तपाई कुरा गर्नुहुन्छ, पाठ जादुई रूपमा तपाइँको कम्प्युटर र तपाइँको साथीको भिडियोफोनमा देखा पर्नेछ।
यदि तपाईं दुबै सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, फेस-टु फेस अनुहार कलको गुणवत्तालाई अनुकूलन गर्न यस पृष्ठमा सुझावहरू केवल पढ्नुहोस्।
यदि भिडीफोन प्रयोगकर्ताले सा language्केतिक भाषा प्रयोग गर्न चाहान्छन् तर सम्पर्कले कुरा गर्न चाहान्छ भने, केही देशहरूमा भिडियो रिले सेवाहरू छन् जसले सा language्केतिक भाषा (स्काइप प्रयोग गरेर) र स्पोकन अ a्ग्रेजी (सम्पर्कमा छुट्टै टेलिफोन जडान प्रयोग गरेर) बीचमा व्याख्या गर्छन्। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस हामी सहयोग गर्न सक्छौं कि भनेर सोध्न।
भिडियोफोन धेरै छ विशेषताहरु कि एक अशक्तता को साथ मद्दत गर्न सक्छ। को Konnekt अक्षमता भिडियोफोन उत्पादन, जुन भिडियोफोनमा आधारित छ तर विशेष रूपमा अशक्तताको लागि डिजाइन गरिएको हो थप अद्वितीय हार्डवेयर र सफ्टवेयर सुविधाहरू ती शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको साथ मद्दत गर्न।
भिडिओफोनको टचस्क्रिन प्रयोग गर्न अविश्वसनीय सरल छ। यदि तपाईंलाई एक टेबुल, मोनिटर हात वा सूचक खोजी गर्न आवश्यक पर्दछ भने, कृपया हेर्नुहोस् भिडियोफोन सहायक उपकरणहरू.
के तपाई अमेरिकामा बेच्नुहुन्छ? युरोप? अष्ट्रेलिया? अमेरिका? एशिया प्रशान्त? अफ्रीका?
अब मलाई आवाश्यक नभएको भिडीफोनसँग म के गर्न सक्छु?
म कसरी मेरो आमालाई भिडियोफोनको बारेमा बताउन सक्छु? उनीसँग कुनै कम्प्युटर छैन।
के म भर्खर आईप्याड वा ट्याब्लेट प्रयोग गर्न सक्दिन?
के सरकारले मेरो भिडियोफोन अनुदान दिन सक्दछ?
यसले कसरी मेरो पैसा बचत गर्न सक्छ?
के वीडियोफोनले धेरै बिजुली प्रयोग गर्दछ?
YES। Konnekt SELLS विश्वभर संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप, अमेरिका, एशिया प्रशान्त र अफ्रिका सहित। हामीले संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, महाद्वीप (उदाहरणका लागि जर्मनी, बेल्जियम), अष्ट्रेलिया र एशिया (उदाहरणका लागि जापान, मलेसिया), अफ्रिका… विश्वभरका भिडियोफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई सन्तुष्ट गरेका छौं। अक्सर ग्राहक र प्रयोगकर्ता (सामान्यतया बुढेसकालका अभिभावक) बिभिन्न देशहरुमा छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अमेरिका
अमेरिकी मूल्य निर्धारण प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
संयुक्त राज्य अमेरिका र मध्य र दक्षिण अमेरिका मा, ग्राहकहरु हाम्रो कल अमेरिकी पार्टनर बिक्री को लागी र समर्थन को लागी व्यापार घण्टा को लागी। के तपाई दिनमा धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ? तपाईं पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ Konnekt हाम्रो अमेरिका पछि घण्टा फोन नम्बर तपाईको ढिलो दिउँसो र बेलुका साँझको बखत, जब तपाई आफ्नो परिवारलाई मद्दत गर्न धेरै समय खर्च गर्नुहुन्छ। तपाईको साँझको समयमा आफूलाई उपलब्ध गराएर हामी यसको फाइदा लिन्छौं Konnektअस्ट्रेलियाको स्थान र समय क्षेत्र। त्यसोभए यदि तपाइँ हामीलाई हाम्रो घण्टा पछि युएस नम्बरमा कल गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया कहिलेकाँही एउटासँग कुरा गर्ने आशा गर्नुहोस् Konnekt एक अष्ट्रेलियाली उच्चारण संग प्रतिनिधि! हामी संग एक अमेरिकी रसद साइट छ।
अमेरिकामा, हाम्रो सबैभन्दा पुरानो प्रयोगकर्ता is 99 हो! उसको परिवारका सदस्यहरूले उनलाई अमेरिका भरिका आमने-सामने बुलाए। उसको नाति नेत्रहीन रूपमा जाँच गर्न मन पराउँछन् कि "हजुरबुबा" खुशी छन् र राम्रो गर्दैछन्, र हजुरबुबा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ठूला-नातिनातिनीहरूलाई देखेर खुशी छन्। Konnekt भिडियोफोन आवासीय वृद्ध देखभाल, सेवानिवृत्ति गाउँहरू, मेमोरी क्लिनिकहरू, र निजी घरहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
हामीलाई थाहा छ यो के हो जस्तो विदेशी कम्पनीबाट खरीद गर्न Konnekt, साथसाथै अमेरिका र क्यानडामा हाम्रा साझेदारहरू, A + सेवा र समर्थन प्रदान गर्न हाम्रो तरिकाबाट टाढा जान्छ। यसमा तपाईंलाई पहिलो अनुभव फोन वा स्काईप मार्फत हिंड्नु समावेश छ यदि आवश्यक छ भने, र प्रत्येक रिश्तेदार / सम्पर्क कल गर्नको लागि उनीहरूलाई सहज बनाउन स्काइपमा "ग्रान" कल गर्न को लागी सहज, ठूलो अनुहारको साथ।
उत्तर अमेरिका geriatics र मानसिक स्वास्थ्य मा अग्रणी धार अनुसंधान को घर छ। पढ्नुहोस् यहाँ हाम्रो सहयोगी प्रोफेसर अलान टेओको बारेमा, ओरेगन स्वास्थ्य तथा विज्ञान विश्वविद्यालयका एक चिकित्सक र अनुसन्धान नेता, र किन पत्ता लगाउनुहोस् - डा। टेओको जग्गा-सम्बन्धी अध्ययनको अनुसार - अनुहारको सामना सम्पर्क हो महत्वपूर्ण सुधार्नु वृद्ध स्वास्थ्य, र सामाजिक अलगाव र उदासी कम गर्न।
यूरोप, अफ्रिका, ओशिनिया
Konnektको लन्डन-आधारित बिक्री साथी, भियना-आधारित बिक्री पार्टनर, र अस्ट्रियामा हाम्रो रसद साइटले ब्रिटेन र युरोपमा ग्राहकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। हाम्रो बेलायतका ग्राहकहरूले या त निश्चित स्थान वा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन्, तिनीहरूको स्थानमा र के उत्तम काम गर्दछ। महाद्वीप युरोप, अफ्रिका र एशियामा, जहाँ अ usually्ग्रेजी प्राय: पहिलो हुँदैन भाषा, हामीसँग भिडिओफोन पूर्ण रूपमा स्थानीयकृत र निजीकृत छ! उदाहरण को लागी, म्यूनिख मा एक भिडियोफोन धेरै देशहरु मा परिवारका सदस्यहरु लाई कल गर्न बटन छ, र सबै संकेतहरु र बटन जर्मन भाषा मा छन्।
हार्डवेयर समर्थन सजिलो छ। हाम्रो हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता एक शीर्ष-दस कम्प्युटर / परिधीय निर्माता हो, विश्वभरि सेवा केन्द्रहरूसँग। सफ्टवेयर 100% हो Konnekt स्वामित्व र विकसित, र सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू - जुन समय समयमा आवश्यक हुन्छ - र आफैंमा स्वचालित रूपमा डाउनलोड गर्नुहोस्, राती। कुनै डरावनी पप-अप वा अनुस्मारकहरू छैनन्! स्काइप नै विश्वव्यापी रूपमा अविश्वसनीय रूपमा राम्रोसँग काम गर्नका लागि प्रख्यात छ, जहाँसुकै भरपर्दो इन्टरनेट छ। र Konnekt एक उदार वापसी नीति छ र वारेन्टी.
हाम्रो "सब भन्दा वितरित परिवार" एक एसियाली देश मा भिडियोफोन प्रयोगकर्ता, र संयुक्त राज्य अमेरिका, ओशिनिया र यूरोप भर परिवार (सम्पर्क) छ। हामी "ग्रान" को बारेमा एक कथाको टचमा विश्वभर आफ्ना नातिनातिनाहरूसित कुरा गरिरहेको बारेमा कथाहरू सुन्छौं!
तपाईको डेलिभरी ठेगानाका लागि उद्धरण प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
यसलाई बेच्नुहोस् वा नातेदार वा साथीलाई दिनुहोस्। हामी यसलाई पुन: निजीकृत गर्न सक्दछौं।
Konnekt एक खरीद फिर्ता कार्यक्रम छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस विवरण लागि।
विन्डोज स्थापना गर्न सकिन्छ। यो एक शक्तिशाली स्पर्श पीसी बनाउँछ। किबोर्ड र माउस थप्न सकिन्छ।
उसलाई हाम्रो देखाउनुहोस् घर पृष्ठ or भिडियो तपाईको मोबाईलमा
हाम्रो डाउनलोड र प्रिन्ट गर्नुहोस् उत्पादन फ्लायर.
यो धेरैमा प्रदर्शनमा छ कुञ्जी स्थानहरू.
हो। यदि तपाईं नयाँ अपरेटिंग प्रणाली, उपकरण र अनुप्रयोगहरू सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईको आँखाहरू र सुन्ने महान छन्। यदि तपाईका हातहरू साना आईकनहरू ट्याप गर्न पर्याप्त स्थिर छन्; स्वाइप, पिन्च-जुम र स्पिन; थोरै अन-स्क्रीन कीबोर्डहरू काम गर्नुहोस्; र fiddly चार्जर कनेक्ट। यदि तपाईंसँग बिरामी आईटी मान्छे हुन्छ भने सधैं हातमा।
एक दर्जन भिडियोफोन लाभ:
अविश्वसनीय रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो - ढोका खोल्न भन्दा सजिलो।
BIG बटन र LARGE स्क्रीन - आईप्याड भन्दा धेरै ठूलो।
LOUD - जुम्ल्याहा फ्रन्ट स्पिकर। सुन्नुहोस् धेरै कोठामा यसको घण्टी बन्नेछ।
कुनै पप-अप, विज्ञापन वा अद्यावधिक अनुरोधहरू छैनन्। कुनै लगइन, पासवर्ड, आईकन वा अनुप्रयोगहरू छैनन्।
ब्याकअप नम्बरहरू (घर / अफिस फोनहरू) भनिन्छ, पालैपालो, यदि त्यहाँ अनुहार जवाफ छैन भने।
स्वत: उत्तर छनौट गरिएको छ: केवल अधिकृत कलरहरू, तपाइँ उत्तर दिनको लागि ठीक हुनुहुन्छ भनेर जाँच्न!
पूर्ण रूपमा स्थापित। केबलहरूमा गलत स्थान, क्षति, र ट्रिपिंग रोक्न मद्दत गर्दछ।
एक स्पर्श KONNEKT बटन वा मद्दतको लागि कल गर्नुहोस्। आईटी केटाको आवश्यक पर्दैन।
निजीकृत। केवल परिवार, साथीहरू र सेवा प्रदायकहरू तपाईं चाहानुहुन्छ।
परिवर्तनहरू: हामी तिनीहरूलाई तपाईंको लागि, टाढाबाट, कुनै भ्रमण बिना नै गर्दछौं।
प्रतिरोधात्मक टचस्क्रीन। यसको प्रयोग ग्लोभ, पट्टी, कृत्रिम वा कुनै सूचकको साथ गर्नुहोस्।
कुनै डरलाग्दा अनुरोधहरू, सन्देशहरू वा अपरिचितहरूको कलहरू छैनन्।
भिडियोफोन गलत ठाउँमा राखिने छैन, चार्ज छोडेर, वा कमजोर Wi-Fi कोठामा प्रयोग गरिने छैन। यी पोर्टेबल ट्याबलेट भिडियो कलिंगको अत्यन्त साधारण गुनासोहरू हुन्।
हामी पनि मद्दत गर्दछौं साथी र परिवार स्काईपमा जानुहोस्, र परीक्षण र तिनीहरूलाई अनुकूलन, एक उच्च गुणवत्ता अनुभव को लागी!
पुरानो वयस्कहरू होम केयर प्याकेजको लागि योग्य हुन सक्छ (उदाहरणका लागि अष्ट्रेलियामा: HCP र CHSP कार्यक्रमहरूले सहयोगी टेक्नोलोजीलाई समावेश गर्दछ, संचार सहयोग सहित, सामाजिक अलगाव कम गर्न वा स्वतन्त्र रूपमा बस्नेहरूलाई समर्थन गर्न)
अशक्तता: एक व्यावसायिक थेरापिस्टले श्रवणशक्ति, दर्शन, निपुणता, शिक्षा वा अन्य कमजोरीहरू (उदाहरणका लागि अष्ट्रेलियामा: एनडीआईएस कार्यक्रम, साथै विभिन्न राज्य-आधारित अक्षमता उपकरण कार्यक्रमहरू)
अन्य देशहरू: तपाईंको स्थानीय सरकारको अशक्तता वा बुजुर्ग सेवा एजेन्सी, वा तपाईंको स्वास्थ्य बीमा प्रतिनिधिलाई सोध्नुहोस्।
90% तपाईंको टेलिफोन कलहरू तपाईंको भिडियोफोनबाट कलहरूको साथ बदल्नुहोस्:
असीमित फेस-टु-फेस कलहरू, विश्वका कुनै पनि ठाउँमा, विदेशी साथीहरू सहित
नियमित टेलिफोनमा असीमित कलहरू - स्थानीय र लामो दूरी
स्काईप प्रयोग गरेर मोबाइल फोनमा असीमित कलहरू
हामीले फोन बिल देख्यौं कि per १०० प्रति महिना!
एक "आधारभूत" योजना को लागी तपाईको फोन सेवा सदस्यता घटाउनुहोस्।
एक प्रयोगकर्ता $ 50 टेलिफोन योजनाबाट प्रति महिना $ 24.90 मा परिवर्तन भयो
तपाईंको साथीहरू र आफन्तहरूले तपाईंलाई तपाईंको भिडियोफोनमा स्काईप प्रयोग गरेर उनीहरूको मोबाइल, आईप्याड / ट्याब्लेट वा कम्प्यूटरबाट कल गर्न सक्दछन्।
तिनीहरूले आफ्नो घर फोन बिल कम गर्न सक्छन् - विशेष गरी यदि तिनीहरू विदेशमा वा अन्तरदेशीय छन्!
तिनीहरूले आफ्नो मोबाइल फोन बिलहरू कम गर्न सक्दछन् - विशेष गरी आफन्तहरू जसले तपाईंलाई प्रायः कल गर्छन्
हामी कल बटनहरू थप गर्न सक्छौं जुन तपाईंको सेवा प्रदायकहरूलाई पनि कल गर्दछ। वरिष्ठ छूट, वफादारी कार्यक्रम र "जीवनसाथी दर" को फाइदा लिनुहोस्। तपाईंको मनपर्नेमा असीमित कलहरू:
माली, ह्यान्डम्यान, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन र क्लीनर
चिकित्सा चिकित्सकहरू, मसाज, फिजियो, नर्स, पोडियाट्रिस्ट
हेयरड्रेसर, फ्लोरिस्ट, उपहार पसल, थिएटर, न्यूजजेन्ट
खाद्य वितरण सेवाहरू
ग्यास, बिजुली, फोन प्रदायक, पशु चिकित्सक, स्थानीय काउन्सिल
टेलमार्केटर वा स्क्यामर / जालसाजीहरूबाट कुनै कलहरू छैनन्।
अज्ञात कलरहरूबाट भिडियो फोन ब्लक।
कुनै कलर लाइन पहिचान भिडियोफोनबाट अर्को पार्टीमा पठाइएको छैन।
हामी तपाईको नियमित फोनलाई कल नगर्नुहोस् रजिष्टरको साथ दर्ता गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं।
वयस्क केयरका लागि (त्यहाँ त्यहाँ आपतकालीन नर्स-कल बटन छ):
भिडियोफोनले फोनको आवश्यकता पूर्ण रूपमा बदल्न सक्छ।
धेरै वृद्ध देखभाल सुविधाहरूले बासिन्दाहरूलाई वाइफाइको साथ निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्दछ।
होइन। भिडियोफोनले ल्यापटपको तुलनामा धेरै कम बिजुली प्रयोग गर्दछ।
मौन ठोस राज्य ड्राइव (SSD)।
कम पावर उपभोग इन्टेल मोबाइल सीपीयू।
कुनै कूलि fan फ्यान, किबोर्ड, माउस, ट्र्याक-प्याड, ब्याट्री प्याक वा अप्टिकल ड्राइभ छैन।
स्क्रिन सेभरले पूर्ण रूपले LCD स्क्रीन अफ-अफ गर्न सक्दछ जब प्रयोगमा छैन।
बिजुलीको लागि प्रति दिन केही सेन्ट मात्र खर्च हुन्छ!
के मेरो भिडियोफोन भोल्यूम बढाउन सकिन्छ?
के म कल बटन वा कल बटन लेआउटको नम्बर परिवर्तन गर्न सक्छु?
नयाँ सम्पर्कको लागि म कसरी कल बटन थप्न सक्छु?
के म मेरो कल बटनहरू पढ्न सजिलो बनाउन सक्छु?
के म भ्वाइसमेल वा उत्तर मेशीनसँग कुरा गर्नबाट बच्न सक्छु?
अब के मैले कसैलाई फोन गरेको फरक नम्बर छ भने?
म कसरी अनावश्यक कलरहरू रोक्न सक्छु?
अनजाने कल कल नगरी म कसरी स्क्रिन सफा गर्ने?
म भिडियो फोटोमा कसरी फोटोहरू साझेदारी गर्छु?
मेरा सम्पर्कहरूले स्काईप अनुप्रयोग बिना नै मोबाइल फोनमा कसरी जवाफ दिन सक्दछन्?
ब्याकअप नम्बरहरू कसरी काम गर्छन्?
यो निजी हो?
हामी तपाईको लागि भोल्युम परिवर्तन गर्न सक्दछौं, भ्रमण गर्नु आवश्यक छैन। हामी आवाज वा शान्त कोठाको लागि भोल्युम अनुकूलित गर्न सक्छौं। हामी घन्टीको आवाज पनि बढाउन वा कम गर्न सक्दछौं, वा अधिक तीव्र घण्टी बजाउछौं। हेर्नुहोस् भिडियोफोन प्राथमिकताहरू वा बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
हामी तपाईंको लागि कल बटनको संख्या परिवर्तन गर्न सक्दछौं भ्रमण गर्न को आवश्यकता बिना, र तिनीहरूलाई प r्क्ति र स्तम्भहरूमा तपाईंले चाहानुभएको तरिकामा व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ तपाइँको एक साथी को लागी एक बटन थप्न वा हटाउन पर्ने हुन सक्छ, वा तपाइँ तपाइँको मनपर्दो सम्पर्क शीर्ष पंक्तिमा राख्न चाहानुहुन्छ। हेर्नुहोस् भिडियोफोन प्राथमिकताहरू वा बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस तपाईंको सम्पर्कको नाम, ईमेल ठेगाना, फोन नम्बरहरू, र (यदि उनीहरूसँग एक छ) तिनीहरूको स्काईप नाम वा Microsoft खाता विवरणहरूको साथ। हामी बाँकी गर्नेछौं।
यदि तपाईंको सम्पर्कले स्काइप प्रयोग गरेको छैन वा केही मद्दतको आवश्यक छ भने, तिनीहरूलाई पठाउनुहोस् https://www.konnekt.com.au/get-skype/, वा हामी तिनीहरूलाई पठाउन एक सुरु गर्दै इमेल।
यदि तपाईंलाई धेरै सम्पर्कहरू थप्न वा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं हाम्रो अन्तमा फारम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोफोन प्राथमिकताहरू पृष्ठ।
हामी तपाईको लागि बटन बीच टेक्स्टको आकार बढाउन सक्दछौं। हामी फन्ट (टाइपफेस) र रंग योजना पनि अनुकूलित गर्न सक्छौं। तपाईंसँग अर्को भाषामा सम्पर्क नाम पनि हुन सक्छ, जस्तै सरलीकृत चीनियाँ। छोटो सम्पर्क नामहरू प्रयोग गरेर, जस्तै "बार्टोलोमाइव" को सट्टा "बार्ट", अब टेक्स्ट साइज बढाउनुहोस्। हेर्नुहोस् भिडियोफोन प्राथमिकताहरू वा बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
Konnekt अनुक्रममा पाँच अलग नम्बर वा स्काईप नामहरूमा तपाईंको सम्पर्क कल गर्न को लागी प्रत्येक कल बटन लाई अनुकूलित गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, यदि बिल संग घर फोन, एक काम फोन र स्काइप नाम छ, हामी पहिले "स्काईप" मा बिल प्रयास गर्न एक "बिल" बटन सेटअप गर्न सक्दछौं, तब उनको कामको फोन नम्बर रिंग गर्न सक्नेछन र यदि उसले आफ्नो कामको नम्बरमा जवाफ दिएन भने। २ say सेकेन्ड भित्र (भन्नुहोस्), अन्तिममा बिलको घर फोन नम्बर प्रयास गर्न। यसले तपाईंको कललाई बिलको काम भ्वाइसमेल वा उत्तर मशीनरी द्वारा जवाफ दिनबाट रोक्छ। एक बटनले काम गर्ने तरीका परिवर्तन गर्न वा बटन थप्न / हटाउनको लागि हेर्नुहोस् भिडियोफोन प्राथमिकताहरू वा बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
हामी थप्न, हटाउन वा परिवर्तन गर्न सक्दछौं कुनै फोन नम्बर वा स्काईप नाम तपाईंको लागि तपाईंको कुनै सम्पर्कहरूको भ्रमण गर्न को लागी। हेर्नुहोस् भिडियोफोन प्राथमिकताहरू वा बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
हामी तपाईंको भिडियोफोन सेट अप गर्न सक्दछौं ताकि यसले तपाईंले नामांकन गर्नुहुने सम्पर्कहरूबाट मात्र आगमन कलहरू अनुमति दिन्छ। यसले सहयोग गर्दछ अनावश्यक कलहरू रोक्नुहोस् र टेलमार्केटिंग। यसले पनि सहयोग पुर्‍याउँछ मालिसियस र धोखाधडी कलहरू रोक्नुहोस्। यदि तपाईंसँग सम्पर्क छ जुन तपाईं कल गर्न चाहानुहुन्छ तर जसलाई तपाईं कल गर्न सक्षम हुनुहुन्न - उदाहरण को लागी, एक आनन्दित चचेरो भाई जो जहिले पनि केहि सोध्न 10pm मा कल गर्दछ - हामी त्यसलाई सेट अप गर्न सक्छौं तिम्रो लागि। यसको विपरीत, यदि तपाईं आफ्नो भान्जाको कल बटन हटाउन चाहानुहुन्छ तर तपाईंको भान्जाले तपाईंलाई भेट्न अनुमति दिनुहुन्छ, हामी त्यो पनि गर्न सक्छौं। हेर्नुहोस् भिडियोफोन प्राथमिकताहरू वा बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
अद्यावधिक: हामी अब कुनै पनि कलरबाट आगमन कलहरूलाई अनुमति दिन तपाईंको भिडियोफोन सेटअप गर्न सक्छौं। यो मोड पहिलो दुई हप्ताको समयमा उपयोगी हुन सक्दछ, जबकि परिवारले अझै स्काइप खाताहरू संगठित गरिरहेछ। यो पनि उपयोगी छ यदि तपाईंले हामीलाई आफ्नो भिडियोफोन एक नियमित टेलिफोन नम्बर दिन आग्रह गर्नुभयो, र तपाईं चाहनुहुन्छ कि कोही पनि टेलिफोन नम्बरबाट भिडियोफोन कल गर्न सक्षम होस्।
समय समयमा, स्क्रिनलाई औंला प्रिन्ट मार्क वा धुलो हटाउनको लागि पछाडि आवश्यक पर्दछ। तपाईंले स्क्रिन सफा गर्दा भिडियो कल कल गर्नबाट रोक्नको लागि:
एउटा ओसिलो वा सुक्खा लिन्ट-मुक्त कपडा फेला पार्नुहोस्। कुनै तरल पदार्थ, कुनै सफाई तरल पदार्थ, कुनै रसायनहरू।
ठुलो क्लीन बटन छुनुहोस्। यदि अनुपलब्ध छ भने, पावर अफ गर्नुहोस्।
ठूला सर्कलमा स्क्रीन वाइप गर्नुहोस्। धेरै कडा प्रेस नगर्नुहोस्!
यदि तपाईंलाई केही थप सफा गर्न आवश्यक छ भने, यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
कुनै पनि फोटो दृश्यकर्ता, वा तपाईंको सोशल मिडिया प्रयोग गरेर तपाईंको आफ्नै उपकरणमा फोटोहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो नतीजाहरूको लागि, फोटोले सम्पूर्ण स्क्रिन लिनुपर्दछ। विस्तृत देखाउन जुम इन गर्नुहोस्।
भिडिओफोन प्रयोगकर्ताले केहि गर्दैन। केवल मुस्कुराउनुहोस्, फोटोहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् र कार्यक्रमको आनन्द लिनुहोस्!
उनीहरू आउने स्काईप कलहरूलाई उनीहरूको मोबाइल फोन नम्बरमा फर्वार्ड गर्न सक्दछन्।
अनुरोध skype.com कुनै पनि ब्राउजरमा (वा, नयाँ स्काईप अनुप्रयोग भित्रबाट) लगईन गर्नुहोस् र जानुहोस् खाता सेटिङ
सानो स्काईप क्रेडिट वा सदस्यतामा मोबाईलमा कलहरू थप्नुहोस्
अन्तर्गत सुविधाहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् र सक्षम गर्नुहोस् कल अग्रेषण गर्दै, मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र पुष्टि / बचत गर्नुहोस्
अग्रेषित इनकमिंग कलहरूले केही स्काईप क्रेडिट वा मिनेटहरू प्रयोग गर्दछन्, असीमित सदस्यता प्रयोग नभएसम्म
वैकल्पिक रूपमा, उनीहरू आफ्नो घर वा कार्यालयको फोन कल गर्न सक्दछन् (यदि जवाफ नभएमा) उनीहरूको मोबाइलमा:
कसरी भनेर जान्नको लागि तपाईंको फोन सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
जब तपाईं कल बटन छोउनुहुन्छ, तपाईंको भिडियोफोनले तपाईंको सम्पर्कलाई आमनेसामने पहिलो कल गर्दछ (तपाईंको सम्पर्कको स्काईप नाम नभएसम्म वा तपाईंले हामीलाई फरक तरिकाले सेटअप गर्न नसक्नु नभएसम्म)।
यदि तपाईंको सम्पर्क स्काइपमा जवाफ नदिने हो भने, समय अवधि पछि तपाईंको भिडियोफोनले प्रत्येक ब्याकअप नम्बरलाई कलमा कल गर्दछ। ब्याकअप नम्बर सामान्यतया घर वा कार्यालय ल्यान्डलाइन फोन नम्बर हो।
कुनै पनि फोन नम्बर याद गर्नु पर्दैन।
एक कल बटन को एक स्पर्श को लागी तपाइँको सम्पर्क मा पुग्नेछ, जे भए पनि तिनीहरू जहाँ भए पनि।
हाम्रो हेर्नुहोस् ब्याकअप नम्बर भिडियो तिनीहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर।
तपाईं प्रत्येकको सम्पर्कको स्काईप नाम र ब्याकअप नम्बरहरू प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो प्रयोग गरेर भिडियोफोन प्राथमिकता फारम वा साधारण रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
हो। भिडियो र ध्वनी दुबै दिशामा ईन्क्रिप्टेड छन्। तपाईका सम्पर्कहरूले मात्र तपाईलाई कल गर्न सक्दछन्। तपाइँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ जो तपाइँको सम्पर्कहरु थप्न वा परिवर्तन गर्न को लागी अधिकृत छ। क्यामेरा र माइक्रोफोन कलको क्रममा मात्र सक्रिय हुन्छन्।
पनि हेर्नुहोस् Konnektको गोपनीयता नीति.
म कसरी सम्पर्क गर्न सक्छु Konnekt?
के Konnekt मेरो लागि सबै परिवर्तन गर्नुहुन्छ?
मेरा सम्पर्कहरू स्काईपमा कसरी पुग्न सक्छ?
के तपाई मलाई इन्टरनेटको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
के Konnekt वास्तवमै विश्वव्यापी आईटी समर्थन प्रदान गर्नुहुन्छ?
भिडिओफोन कसरी अद्यावधिक हुन्छ?
के नियमित टेलिफोनमा कलहरू वास्तवमा असीमित छन्?
किन गर्छ Konnekt Skype प्रयोग गर्नुहुन्छ?
मेरो सम्पर्कहरूले अनुहार-अनुहार गुणस्तर सुधार गर्न के गर्न सक्दछन्?
तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ Konnekt ठूलो छोएर Konnekt तपाईंको भिडियोफोन स्क्रिनमा बटन, हाम्रो फोन वा स्काईप नाम कल गर्दै, हाम्रो हुलाक ठेगानामा पत्र लेख्ने वा हामीलाई ईमेल पठाएर पूरा गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस हाम्रो वेबसाइटमा फारम। तपाईं हाम्रो फोन नम्बरहरू, स्काइप आईडी र हुलाक ठेगाना फेला पार्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
हो! "परिवर्तनहरू" हाम्रो सेवाको अंश हुन्, र हामीलाई अद्वितीय बनाउन मद्दत गर्दछ।
व्यावहारिक हिसाबले विडियोफोनको बारेमा सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हामीबाट टाढाबाट। कसैलाई पनि भ्रमण गर्नुपर्दैन।
हाम्रा ग्राहकहरु यो सेवा मन पराउछन्! जब तिनीहरूले परिवारका अन्य सदस्यहरू र साथीहरूको सम्पर्क विवरणहरू प्राप्त गर्छन्, तिनीहरूले केवल ती विवरणहरू हामीलाई पठाउँछन्, र हामी बाँकी गर्छौं।
यदि प्रयोगकर्ताको सुनुवाइ बिग्रन्छ वा उनीहरू सानो घरमा जान्छ भने, हामी भोल्यूम र, अलग-अलग, घण्टी बजाउन सक्छौं।
परिवर्तन अनुरोध गर्न: साधारण रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस ईमेल द्वारा, हामीलाई कुनै पनि फोनबाट वा स्काइप मार्फत कल गर्नुहोस्, वा भिडियोफोनको ठूलो प्रेस गर्नुहोस् Konnekt टांक। वैकल्पिक रूपमा, हाम्रो प्रयोग गर्नुहोस् भिडियोफोन प्राथमिकताहरू फारम।
तपाईंको सम्पर्कहरू पठाउनुहोस् https://www.konnekt.com.au/get-skype/ साधारण गाईडका लागि, वा साधारण रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस तिनीहरूलाई पठाउन सुरु गर्दै ईमेल हाम्रा सबै ग्राहकहरू, विश्वव्यापी रूपमा, एक निजीकृत सेवा प्राप्त गर्नुहोस् जसमा मित्रहरू र परिवार जाने काम समावेश गर्दछ। यसले समग्रमा एक अद्भुत अनुभव, र तपाईंको सबै भिडियो कलहरूको लागि उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
Konnekt तपाईंलाई उत्तम इन्टरनेट सौदाहरूको साथ मद्दत गर्दछ, र तपाईंको इन्टरनेट सेवा छनौट गर्न र परीक्षण गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईं संसारमा भए पनि फरक पर्दैन।
कुनै ईन्टरनेट: कुनै पनि प्रकारको इन्टरनेट ठीक छ। एडीएसएल, वीडीएसएल, केबल / एचएफसी, अप्टिकल, / जी / G जी / G जी मोबाइल (सेलुलर) इन्टरनेट।
योजना: इन्टरनेट सामान्यतया १२-महिना वा २--महिना सम्झौतामा सस्तो हुन्छ, तर यदि तपाईं एक परीक्षण वा भाँडामा हुनुहुन्छ भने महिना-महिनाको सम्झौताको लागि जानुहोस्।
वाइफाइ वा वायर्ड: भिडियोफोनले मोडेम / राउटरलाई Wi-Fi (802.11०२.११ g / n / ac, २.2.4 GHz वा G GHz) मार्फत वा नियमित LAN केबल मार्फत जडान गर्न सक्छ।
गति: हामी कम्तिमा 2.0 / 0.7 MBS (मेगा) सिफारिश गर्दछौंबिट प्रति सेकेन्ड) भरपर्दो डाउनलिंक / अपलिंक गति। प्राथमिकता 3.0.० / १.० एमबीपीएस। मा टेस्ट www.speedtest.net.
ओठ पढ्नको लागि: कम्तिमा 2.0 / 1.5 MBS। अधिमानतः 3.0 / 2.0 MBS। वायर्ड ल्यान प्रयोग गर्नुहोस् जबसम्म भिडियोफोन वाइफाइ मोडेम / राउटर जस्ता कोठामा हुँदैन।
तथ्याङ्क: यदि तपाइँ स्थिर इन्टरनेट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी सिफारिस गर्दछौं कम्तिमा GB० जीबी (गीगाबाइट्स) डाटा। लगभग-50-85 ०% ग्राहकहरूले एक महिनामा GB GB भन्दा कम प्रयोग गर्दछन्, त्यसैले यदि तपाईं मोबाइल (सेलुलर) इन्टर्नेटमा हुनुहुन्छ भने a- GB GB पूर्व-भुक्तान सेवा र मोनिटर प्रयोगको साथ सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईं प्रति दिन दुई घण्टा भन्दा धेरै भिडियो कलिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने, हामी प्रत्येक महिना १०-१-90 जीबी सिफारिश गर्दछौं।
अधिक डाटा: यदि तपाइँ मोबाइल (सेलुलर) इन्टर्नेट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, पूर्व-भुक्तान गरिएको एक सौदा छनौट गर्नुहोस्, वा मासिक डेटा भत्ता प्रयोग गरिसकेपछि गति थ्रोटल गरिएको योजनामा। "ओभररेज" (अधिक डाटा) शुल्क लगाउने योजनाहरू बेवास्ता गर्ने प्रयास गर्नुहोस् - हामीले मानिसहरूमा उनीहरूको "क्याप" मा जानको लागि सामान्य मासिक योजना शुल्कको दस गुणा चार्ज गर्ने डरलाग्दो कथाहरू सुनेका छौं। यदि शंका हो भने, हामीलाई सोध्नुहोस्।
साझा: यदि इन्टरनेट साझा गरिएको छ: असीमित डाटाको साथ एक योजना सिफारिश गरिन्छ। यदि तपाईंको क्षेत्रमा गति सुस्त छ भने, कलको समयमा अन्य प्रयोगहरू रोक्नुहोस्।
वाइफाइ: तपाईले वाइफाइ पासवर्ड थाहा पाउनु पर्छ, र तपाईलाइ चाहानु भएको भिडिओफोन स्थानमा कडा Wi-Fi सिंगल हुनुपर्दछ।
मोडेम / राउटर उही कोठामा छैन भने वाइफाइ विस्तारकको आवश्यक हुन सक्छ। हामी मद्दत गर्न सक्दछौं - धेरै वाइफाइ एक्सटेन्डरहरू धेरै अविश्वसनीय छन् तर हामीले एउटा मोडल फेला पार्‍यौं जुन काम गर्दछ।
अझ राम्रो, ल्यान केबल प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरस्कार विजेता वाइफाइ राउटर : हामी सिफारिस गर्न वा आपूर्ति गर्न सक्दछौं अत्यधिक विश्वसनीय मोडेम राउटर, सेट अप गरी जान तयार छ, २-मार्ग भिडियोको लागि अनुकूलित।
एउटा समर्थन संख्या: केवल हामीलाई कल गर्नुहोस्, हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् वा सबै भिडियोफोन र आईटी / इन्टरनेट समर्थनका लागि अनलाइन च्याट प्रयोग गर्नुहोस्।
Konnekt प्रयोगकर्ताको लागि र परिवार र साथीहरूका लागि आईटी समर्थन प्रदान गर्दछ। यसले हामीलाई अद्वितीय बनाउन मद्दत गर्दछ।
यसले गैर- लाई पनि विस्तार गर्छKonnekt उपकरण र सेवाहरू, जस्तै तेस्रो-पार्टी इन्टर्नेट र मोडेमहरू / राउटरहरू। को Konnekt टोलीसँग अनुभवको एक अविश्वसनीय मात्रा छ। हामीले यो सबै देख्यौं। हामीसँग Wi-Fi, इन्टरनेट, मोडेम / राउटरहरू र विस्तारकहरूको साथ सबैभन्दा कठिन समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न धेरै उपकरणहरू र तरिकाहरू छन्। र हामीसँग सेवालाई मजबूत र विश्वसनीय बनाउनको लागि हाम्रा आफ्नै विधिहरू छन्।
हाम्रा धेरैजसो ग्राहकहरू प्रयोगकर्ताबाट 20 मिनेट भन्दा टाढा बस्छन्। धेरै अन्तरराज्यीय वा विदेशी हुन्। र ती सबै (विशेष गरी आईटीमा काम गर्ने ग्राहकहरू) टाढाको ग्याजेटलाई समर्थन गर्न चाहँदैनन्! यसको सट्टा, तिनीहरू आफ्नो समय उच्च-गुणवत्ता भिडियो र अडियो कुराकानीको मजा लिन चाहान्छन्।
भिडियोफोन सफ्टवेयर एक रातमा स्वचालित रूपमा अपडेट हुन्छन्, जब अपडेट उपलब्ध हुन्छ, प्रदर्शन सुधार गर्न र नयाँ सुविधाहरू उपलब्ध गराउन।
त्यहाँ कुनै पप-अप छैन, कुनै बटन छैन, कुनै सेटिंग्स छैन। अपडेटहरूलाई बिल्कुल कुनै प्रयोगकर्ताको हस्तक्षेप आवश्यक पर्दछ।
सबै भन्दा राम्रो: कुनै फरक पर्दैन कसरी भिडियो कलिंग अनुप्रयोगहरूले अन्य उपकरणहरूमा उनीहरूको हेराई र भावना परिवर्तन गर्न सक्दछ, भिडियोफोनले यसको अविश्वसनीय सजिलो प्रयोगकर्ता इन्टरफेस राख्दछ।
अशक्तता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष विकल्पहरू चाहिन्छ, जस्तै पहुँच बटन वा बत्तीहरू जब आउँदो कल हुन्छ, हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछौं त्यो सबै जानलाई।
हो। भिडिओफोन एक देशमा नियमित ल्यान्डलाइन टेलिफोनमा असीमित कलहरूको साथ आउँदछ। कुनै आश्चर्य छैन।
यदि तपाईंसँग विशेष आवश्यकताहरू छन् (जस्तै परिवार धेरै देशहरूमा फैलिएको छ) हामी लगभग सँधै तपाईंलाई यसको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं।
भिडीफोनले पनि स्काईप चलाउने कुनै पनि उपकरणमा आमनेसामने कलहरू गर्न र प्राप्त गर्न सक्दछ, विश्वव्यापी रूपमा, यो केही देशहरू बाहेक जहाँ यो ब्लक गरिएको छ वा VPN सेवा आवश्यक छ। जब सम्म तपाईंको परिवारका सदस्यले उनीहरूको मोबाइल फोनमा स्काईप अनुप्रयोग चलाउन सक्दछन्, तिनीहरूले भिडियोफोनबाट कल गर्न र प्राप्त गर्न सक्दछन्।
Konnekt 20 बिभिन्न भिडियो कलिंग प्रणाली / प्लेटफर्महरू / अनुप्रयोगहरूको प्रयास पछि स्काइप चयन गरियो।
लामो समयसम्म। स्काइप लोकप्रिय भिडियो कलिंग प्रणालीहरू मध्ये कुनै पनि बाहिर लामो (टाढा) गइरहेको छ।
लगानी। माइक्रोसफ्टले भर्खरै स्काइप अनुप्रयोगहरूको पुन: विकास गर्‍यो, सर्भर पूर्वाधार अपग्रेड गर्‍यो, स्काइपलाई अन्य उत्पादनहरूमा एकीकृत गर्‍यो र स्काईपको सफलतामा भारी लगानी गरिरहेछ।
समर्थन। स्काइप समर्थन अन्तर्राष्ट्रिय हो र यसमा फोरम कर्मचारी द्वारा ब्यबस्थित र विशेषज्ञ अधिवक्ताहरु द्वारा अक्सर।
क्रस-प्लेटफार्म. स्काइप अनुप्रयोगहरू विन्डोज, म्याक, लिनक्स, आईओएस (आईप्याड ट्याबलेट र आईफोनहरू), एन्ड्रोइड (ट्याबलेट र मोबाइल फोन) र एक्सबक्सका लागि उपलब्ध छन्। Skype को अनुप्रयोगको आवश्यकता बिना धेरै कम्प्युटर ब्राउजरहरूमा चल्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय। स्काइप व्यावहारिक रूपमा संसारको हरेक कुनामा काम गर्दछ। केहि देशहरूमा यो ब्लक गरिएको छ वा VPN चाहिन्छ।
उपलब्धता। स्काईपले विरलै हरायो। एक क्लिकको साथ, तपाईं सजीलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ स्काइप स्थिति.
पुनः जडान। जब तपाइँको इन्टर्नेट छोटो पछि आउँछ (5-30 दोस्रो), स्काईप स्वत: पुन: जडान हुन्छ।
कम डाटा उपयोग. स्काइप लाइट Android को लागि पुराना मोबाइल फोनका साथ परिवारका सदस्यहरूको लागि उपलब्ध छ, वा ती देशहरूमा जहाँ इन्टरनेट ढिलो छ वा डाटा महँगो छ।
समूह कलहरू। समूह भिडियो कलहरू, अडियो कलहरू, वा स्काईप र टेलिफोन गन्तव्यहरूको मिक्सको साथ समूह कलहरू।
विशेषताहरु। स्क्रिन सेयरिंग। 60 भन्दा धेरै देशहरूमा नियमित फोन नम्बरहरूमा कल। Skype नम्बरहरू। स्काइप केहि प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो जुन हाम्रो सबै बक्सहरूलाई टिक गर्‍यो।
फायरवाल प्रवेश। स्काइपले प्रायः सबै वातावरणीयहरूमा काम गर्दछ जुन हामीले सामना गरेका छौं, प्राय जसो कर्पोरेसनहरू बैंकहरू सहित।
गोपनीयता। स्काईप कल ईन्क्रिप्टेड छन्।
कल गुणस्तर। स्काइप लगातार उपलब्ध समायोजन, उपलब्ध इन्टरनेट ब्यान्डविथ बनाउँदछ। राम्रो गुण चाहिन्छ? अनुकूलन मा हाम्रो गाइड हेर्नुहोस् भिडियो कल गुणस्तर.
त्याग: Konnekt माइक्रोसफ्ट वा स्काइप प्रतिनिधित्व गर्दैन।
हाम्रो सेवाको अंशको रूपमा, हामी तपाईंलाई र तपाईंको प्रत्येक सम्पर्कहरू (परिवार र मित्रहरू) लाई तिनीहरूको भिडियो कल अनुभवलाई अनुकूलित गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं।
यस बीचमा, यहाँ तपाईंको भिडियोफोन सम्पर्कलाई मद्दत गर्न धेरै विचारहरू छन्:
अपस्ट्रीम गति महत्वपूर्ण छ! सोध्नु Konnekt लागि एनेक्स एम 60-100% ADSL2 + बढावा सम्म।
पज वा अन्य इन्टरनेट प्रयोग कम गर्नुहोस्।
एउटा तारयुक्त ल्यान वा पावर-लाइन संचार जडान प्रयोग गर्नुहोस् वा वाइफाइ राउटरको नजिक जानुहोस्।
यदि मोबाइल इन्टर्नेटमा छ भने बाहिर वा बाहिर संकेत ठाउँमा or वा बढी "बारहरू" जानुहोस्। नयाँ G जी उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
अनुरोध www.speedtest.net। तपाईलाई 2.0 / 0.6 MBS आवश्यक छ, प्राथमिकतामा 3.0 / 1.0 MBS भरपर्दो डाउनलिंक / अपलिंक गति।
छिटो, स्थिर उपकरण
नयाँ कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा मोबाइल प्रयोग गर्नुहोस्।
फेरि सुरु गर्नुहोस्, वा अन्य अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नुहोस्।
पुरानो ल्यापटप: एक USB वेबक्याम / माइक्रोफोन पाउनुहोस्।
मोबाईल / ट्याब्लेटहरू: ल्यान्डस्केप मोड र स्ट्यान्ड प्रयोग गर्नुहोस्।
तस्वीर र ध्वनी
चम्किलो हल्का अनुहारहरू। कुनै पृष्ठभूमि चाल / प्रकाश छैन। अचल राख्नुहोस्। कुनै क्यामेरा शेक छैन।
हेडफोन, ईयरफोन वा हेडसेट लगाउनुहोस्।
हावाको आवाज, ट्राफिक, संगीत र टिभीलाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
टेस्ट कलको साथ ध्वनि स्तरहरू समायोजन गर्नुहोस्।
यदि कारमा वा कमजोर स area्केत क्षेत्रमा, क्यामेरा बन्द गर्नुहोस्।
मोबाईलहरू: ट्याप स्क्रिन, भिडियो पठाउन क्यामेरा प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस्।
आईफोन: स्क्रिन ट्याप गर्नुहोस्, स्पिकर मोडको लागि स्पीकर प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस्।
बढि चाहिन्छ? अनुकूलन मा हाम्रो सरल तर गहन चरण-देखि-चरण गाईड हेर्नुहोस् स्काईप कल गुणस्तर.
पनि हेर्नुहोस् उत्पादन विशेषताहरु र कसरी यो काम गर्दछ.